Xaalad argagax leh oo ka dhacday tartanka qaadista miisaanka culus iyadoo la daawanayo… – Hagaag.com
Xaalad argagax leh oo ka dhacday tartanka qaadista miisaanka culus iyadoo la daawanayo…
Posted on 12 Abriil 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Xaalad laga argagaxo oo lagu arkay shalay tartanka qaadista miisaanka culus ee lagu qabtay Georgia, kadib markii mid ka mid ah tartamayaasha oo haweenay aheyd ay ka jabtay gacanta bidix labo meelood markii ay simbiraxatay.
Haweeneydan Faransiiiska ah Gaelle Kechanka (30 sano) oo dalkeeda ku mataleysa qeybta 76 kg tartanka qaaradaha, waxay dhibane u noqotay dhacdo naxdin leh.
Ka dib markii seddax jeer ay ku guuldareystay isku day in ay kor u qaado 110 kiilo, waxay ku adkeysatay Kechanka in ay markii afaraad isku deydo, laakiin waxay ku dhammaatay qoomamo iyo murug laga yaabo in ay ku soo gebagebowdo mustaqbalkeeda ciyaaraha ama ugu yaraan ka reebto tartanka Olymbiyada ee ka dhici doona magaalada Tokyo ee dalka Japan sanadka soo socda.
Microoonka kaamirada ayaa duubay cod iyo qaylo aad u daran oo ka soo baxayay haweenaydii xoogga laheyd, waxaa halkii ku orday kooxda caafimaadka oo ula cararay Isbitaalka.
Kechanka ayaa lagu xasuustaa in ay horey u qaaday 110 kg culeys ah tartankii horyaalka Yurub ee lagu qabtay dalka Norway, rikoorkeeda ayaa gaaraya 111 kg oo ay ku qaaday sanadkii 2015 magaalada Tbilisi ee Georgia.